Okpokoro Okpukpu Abụọ
Home > Ngwaahịa > Okpokoro Okpukpu Abụọ (Total 9 Ngwaahịa maka Okpokoro Okpukpu Abụọ)
Okpokoro Okpukpu Abụọ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Okpokoro Okpukpu Abụọ manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Okpokoro Okpukpu Abụọ na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Okpokoro Okpukpu Abụọ na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Okpokoro Igwe Na-acha Igwe Mmiri nke Na-adịghị Anya Na-acha Mmiri Abụọ-Agba Ọkụ
Tag: Na-egosi na mmiri adịghị , Okpokoro okpukpu abụọ , Ọkụ n'èzí
Igwe ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, okpukpu abụọ na-agbanwe ìhè, na- akọwapụta mmiri ahụ , nke a kwadebere maka n'èzí, ihe na-adịghị mmiri na nke na-egbuke egbuke, nchịkwa nwere ọgụgụ isi, ìhè ojii ụbọchị, ìhè nke ụtụtụ. N'èzí ọkụ ọkụ Kwadoro na...
Okpokoro Ogige Uhie Mkpụrụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ
Tag: Super Light Waterproof , Ọkụ Mkpọpụ Ime Obodo , Ụlọ Na-apụ n'èzí
Ezigbo ụlọ obibi . Oghere okporo ụzọ na-acha ọkụ ọkụ, ihe mgbagwoju anya nke ihe mgbaàmà, ọkụ ọkụ eletrik na-ekpuchi ọkụ ọkụ, nkwụsị ọsọ, irradiation, na-echere onye isi ụgbọ mmiri. Ọ bụ na abalị dum, ọkụ eletrik, awa asaa nke ọkụ, ọkụ iri na anọ,...
22LED Igwe Uhie Igwe Uhie Na-enwu Uhie Abụọ Na-ahụ Maka Ụmụaka
Tag: N'èzí Patio Lamps , 22LED Mmiri na-adịghị ahụkebe - Igodo isi , Ike ọkụ na-enwu ume nke mmadụ
Ogige nke mbara igwe nke ọkụ ọkụ na-enwu ume nke ụmụ mmadụ na- eji ígwè eletrik na-eji nnukwu eletrik panel, mgbanaka ike, nchedo gburugburu ebe obibi, ọkụ ọkụ ọkụ, ogologo ndụ, ogologo, obere ọdịda mmezi ọnụego, enweghị radiation, nkwụsi elu,...
Okpokoro Ulo oru Ulo oru Ulo oru
Nkwakọ ngwaahịa: Kaadị ma ọ bụ akpa OPP
Tag: Anyanwụ Kwadoro komputa akpa , Ngwongwo Ntanetị Business , Ahịa Akpa Kwadoro
Kọmputa Ngwá Kọmputa akpa bụ ụdị ọhụrụ nke chaja smartphone mobile mobile. Enwere ike iji ya kwado obere ngwa eletriki dịka kọmputa, ederede igwe, igwefoto dijitalụ, MP3, MP4, PSP, IPHONE, IPOD, wdg. N'ihi na anyị na-atụle njirimara nke...
188L DC Ugboro abụọ Ọnụ Ụzọ Igwe Igwe Ntutu Igwe
Tag: Ụbọchị niile ogologo elekere eletriki , DC Ụlọ Mbara Igwe Nri , 188L okpukpu abụọ okpukpu abụọ
Friji nke igwe na-ekpuchi anyanwụ , ike nke isi nke usoro ahụ bụ ike anyanwụ, a na-ejikwa batrị ya. N'ịkwado nkà na ụzụ nke mba na-emepe emepe nke refrigeration na kpo oku, ọ nwere ike ịmata kpọmkwem ọrụ nke refrigeration na kpo oku, ọ dịghị...
Okpokoro Elu Elu Ike Batrị nwere ike ibugharị
Tag: Enwere ike izipu ohere , Ogwe Aluminom Ogwe , Silica Gel Stick
Enwee ike igosi ihu igwe nke nwere ike ịnwụ , Wụnye Post Windo , nke a nwere ike iji chaja ekwentị ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ MP3, nwere ike ịnọnye ụgbọ ala, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ, wetara ezigbo ndụ anyị, dozie ọtụtụ nsogbu na nsogbu, n'èzí njem, anyị...
Okpokoro Okpukpu Abụọ akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Okpokoro Okpukpu Abụọ ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Okpokoro Okpukpu Abụọ kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Okpokoro Okpukpu Abụọ wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.